वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्मकै उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको एनआईसी एसिया बैंक : कम्पनी विश्लेषण
हालसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेको ६ ओटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये यो वर्ष एनआईसी एसिया बैंकको बढी छ । उक्त कम्पनीले असोज ४ गते गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ का लागि कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
यो वर्ष कम्पनीले १९ प्रतिशत बोनस शेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख ५१ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. ३ अर्ब १२ करोड १४ लाख ८७ हजार खुद नाफा गरेको छ । त्यस अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब ४४ करोड ७ लाख ३४ हजार थियो ।
उक्त कम्पनीले मुलुकभर ३२७ ओटा शाखा कार्यालयहरु, ४७० ओटा एटीएम, १०२ ओटा एक्सटेन्सन काउण्टर र ७० ओटा शाखा रहित बैंकिङ्मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । गत असोज ६ गते बिहीवार उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६०५ कायम भएको छ ।
कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ओपनिङ ब्ल्याक मारुबोजू आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ६८ दशमलव ५४ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १४ दशमलव १७ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा जोडिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथिछ ।
बिहीवारको शेयरमूल्य रू. ६०५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिएमा रू. ५७२ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको बिहीवार कायम शेयरमूल्य ६३ दिन यताकै उच्च मूल्य रहेको छ ।